Kubiridzira Android mitambo inogoneka neyekare date hunyengeri | Linux Vakapindwa muropa
Cheat Android mitambo: iro rekare zano rinoshanda
Nhasi kutamba neni Android smartphone, Samsung Galaxy S3, kunyanya neGuta Island mutambo wevhidhiyo, ndanga ndichifunga kana paive neimwe nzira yekuwana goridhe kana mari inokurumidza, sezvo ini ndaive neshungu yekumirira kwenguva yakareba kudaro kubhadhara. Saka ndakatanga kuGoogle kuti ndione kana paine chero hunyengeri kuti ikurumidze kukurumidza.
Ini ndawana mamwe maapplication e kubiridzira mitambo Android, asi ivo vanoda nhare kuti ive midzi. Kuenderera mberi nekutsvaga kwangu ndakawanawo mamwe ma mods, asi sezvo aive akaremerwa handina kuatora. Zvishoma ndakaodzwa mwoyo, ndakaenderera nemutambo kudzamara zano rikauya mupfungwa. Sezvo mhosva dzacho dzinoenderana nenguva, ndafunga nezve hunyengeri hwekare hwekuchinja zuva nenguva (zvinonyanya kushandiswa kudzivirira kuti marezinesi ezvimwe zvirongwa zve software zvinopera) zveiyo Android system kuti uone kana ichishanda.
Chokwadi ndechokuti pfungwa yangu yakashanda zvinoshamisa, zvirinani nemutambo uyu, asi ndinofungidzira uchashanda nevaya vese vanoshandisa iyo system wachi uye zuva remabasa avo. Saka edza uye utaure. Icho hachisi chinhu chinopenya kwazvo, asi nekuda kwekureruka kwayo ndinoda kuigovana newe, zvakare haufanire kuisa chero chinhu kana kudzura foni. Uye iwe unogona kudzokera kuzuva razvino uye zvese zvinoramba zvakaita sezvazvaive, hapana chakarasika pane izvo iwe zvawakawana. Kukanganisa chete kwandakawana ndekwekuti mutambo unoita kunge unoshandisa danda remazuva uye nekudaro mazuva awakatoshandisa haugone kushandisa zvakare
Mamwe mashoko - Musika wepiritsi unoshandura uchifarira Android
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Cheat Android mitambo: iro rekare zano rinoshanda
Maitiro ekuisa Genymotion kutevedzera Android paWindows, Linux uye Mac